We.com.mm - စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူမှန်း သိနိုင်တဲ့ အချက် ၁၀ ချက်
လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်၊ မခိုင်မာဘူးဆိုတာဟာ အပေါ်ယံကြည့်ပြီး ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ တကယ်တမ်း ဘဝရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ကံကြမ္မာရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်တွေကို နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကြုံလာတဲ့အခါကျမှ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုကို တွေ့ရှိနိုင်တာပါ။ တချို့ကလည်း စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသယောင်ထင်ရ ပေမဲ့ တကယ်တမ်း ပျော့ညံ့နေတာမျိုး ပျော့ညံ့တယ် ထင်ရတဲ့သူတွေက စိတ်ဓာတ်မာနေတာမျိုးတွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ ငိုတတ်တဲ့သူတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်လိုပါပဲ၊ တစ်ခါတလေ မှာ ပျော့ညံ့တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အပြုအမူတချို့ဟာလည်း စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်နေတတ်ပါ တယ်။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ပညာရှင် စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်မယ့် အချက် ၁၀ ချက်ကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ကြင်နာတတ်တာဟာ သင့်ကို ပျော့ညံ့သူဖြစ်သွားစေတယ် ဒါမှမဟုတ် လောကွက်ချော်တတ်သူ ဖြစ်စေတယ် လို့ လူအတော်များများက ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ချစ်ခင်ကြင်နာကြောင်းပြတာမျိုး၊ သူတပါးကို ကူညီပေးတတ်တာမျိုးဟာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကြင်နာမှုကိုပြသခြင်းဟာ တွန်းအားပေးမှုနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကို ရရှိစေပါတယ်။ လူတွေ က သင့်အကူအညီကိုမလိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? သင့်ရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့အပြုအမူအတွက် တူညီတဲ့ တုံ့ပြန်မှုမရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့သူတွေက ဂရုမစိုက်တတ်ကြပါဘူး။
၂။ အလိုက်သင့် စိတ်ပြောင်းလဲတတ်ခြင်း
အလိုက်သင့် စိတ်ပြောင်းလဲတတ်တာဟာ လေယူရာယိမ်းတတ်၊ နားယောင်တတ်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် အယုံလွယ် တတ်တဲ့ သဘောကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ စိတ်ကို ဖွင့်ထားပြီး မှားရင်မှားမှန်းသိပြီး အမှန်ကို ပြန်ပြင်တတ်တဲ့ အမှားကိုဝန်ခံတတ်တဲ့ စိတ်ပြောင်းလဲတတ်ခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲဒီလို စိတ်ကို ပြင်ဆင်နေမှ အသက်ကြီးလာလေ စိတ်ဓာတ်က ပိုမိုရင့်ကျက်ခိုင်မာလာလေ ဖြစ်မှာပါ။
၃။ မိမိအားနည်းချက်ကို သိရှိခြင်း
အောက်ကျို့နှိမ်ချတာနဲ့ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို ကိုယ်သိတယ်ဆိုတာ အတော်လေးကွာခြားပါတယ်။ ကိုယ့် အားနည်းချက်ကို ဝန်ခံရတဲ့သတ္တိရှိတယ်ဆိုတာဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် သင်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာလို့ပါပဲ။ မိမိရဲ့ အားနည်းချက်ကို သိရှိပြီး မိမိကိုယ်တိုင် လက်သင့်ခံထားခြင်းဟာ သင့်ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ အခုခေတ်အခါမှာ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းဟာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း ဒါမှမဟုတ် ရည်မှန်းချက်မရှိခြင်းတို့နဲ့ ရောထွေးနေတတ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမား လိုချင်လေ စိတ်ရှည်သည်းခံ ရလေပါပဲ။ အခုရေတွင်းတူးပြီး အခုရေကြည် သောက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် လိုချင်တာကိုရဖို့အတွက် စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်ခြင်းဟာလည်း စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတွေရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒါ ငါတစ်ယောက်တည်း မလုပ်နိုင်ဘူး” လို့ ဆိုလိုက်တာဟာ ပျော့ညံ့အရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘဲ သတ္တိရှိတဲ့ အပြုအမူတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းက စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်မလုပ်တတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ဘဝတစ်လျှောက်မှာ အခြွေအရံအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဝန်းရံပြီး အသင်းအဖွ့ဲအလိုက် လှုပ်ရှားတတ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ် စွာ အကူအညီ တောင်းခံဖို့အတွက် ရှက်ကြောက်မနေကြပါဘူး။
၆။ အရှုံးကို လက်ခံခြင်း
သင့်အနေနဲ့ လုပ်သမျှ လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်နေတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ comfort zone ထဲ ရောက်ရှိနေပြီ လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှားတတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အမှားလုပ်မိပြီး ကျရှုံးခြင်းဟာ သင့်ကိုယ်သင် စိန်ခေါ်ရာရောက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာခြင်းရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ခံစားချက်ကို ထုတ်ပြခြင်း
ဒေါသထွက်ခြင်းတင်မက ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ရှက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ မကျေနပ်ခြင်းတို့လို စိတ်ခံစားချက်တွေဟာ အရမ်း မြိုသိပ်ထားရင် ပိုခံစားရ ခက်ပြီး သင့်ကို နာကျင်စေပါတယ်။ အဲဒီလိုခံစားချက်တွေကို မြိုသိပ်ထားတာဟာ ပျော့ညံ့သူတွေသာ ဖြစ်ပြီး မိမိခံစားချက်ကို ထုတ်ပြောရဲသူတွေကတော့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အရာရာတိုင်းကို မဟုတ်ပေမဲ့ ရှောင့်သင့်တာကို ရှောင်တတ်ရပါမယ်။ သင့်အတွက် အရေးမပါတာတွေ၊ သင် ထိခိုက်နိုင်တာတွေ ရှိလာရင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရှောင်ထွက်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါဟာ သင်ပျော့ညံ့တာမဟုတ်ဘဲ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး စဉ်းစားတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာသူတစ်ယောက်ဆိုတာ ပြသလိုက်တာပါပဲ။
၉။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်း
ကြီးပွားရေးစာအုပ်မျိုး ဖတ်နေရင် လူတွေ လှောင်ပြောင်ခံရသလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖို့ အတွက် အလှောင်ခံရတာကို ဂရုစိုက်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ ပိုကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတာကို ပြသခြင်းဟာ သင့်ဘဝမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အပြောင်းအလဲကောင်းတစ်ခု ဖြစ်အောင် ဖန်တီးချင်တဲ့သဘောမျိုး သက်ရောက် ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတွေထဲ ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတာ၊ မိမိ တိုးတက်ဖို့အတွက် မရှက်မကြောက်ကြိုးစားရဲတာ၊ တိုးတက်ဖို့ ဆန္ဒရှိတာတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာခြင်းရဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုပါပဲ။
၁၀။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နေထိုင်ခြင်း
စိတ်ခံစားချက်တွေကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ခြင်းဟာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာခြင်းရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောက သင့်ကို ဒေါသမထွက်နဲ့လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ (ဒေါသဟာ စိတ်ကိုကျန်းမာစေဖို့ အထောက် အကူဖြစ်စေတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။) ဒါပေမဲ့ ဒေါသထွက်လာချိန်မှာ သင့်လျော်တဲ့ အပြုအမူနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးဆေးဆေး ဖြေရှင်းတတ်ဖို့ကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရင် စိတ်ဆန္ဒသာ ပြင်းပြမယ်ဆိုရင် ဘယ်အရာမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အိပ်မက်တွေလည်း အမှန်တကယ် ဖြစ်လာနိုင် ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာစေဖို့ လေ့ကျင့်မွေးမြူသင့်ပါတယ်။